Kenià: Tompondaka Safari Rugby 7s Mampientanentana Ny Mpanohana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2012 10:26 GMT
@JoyDoreenBiira – mpanolotra TV ogandey manana ny lazany -ao amin'ny Chronicles in My Head mitantara ny hitany (voalohany) nandritra ny Safari7s ;
Bilaogera iray hafa, Pitzevans tao amin'ny bilaoginy, Area 51 dia manan-kambara mikasika ny traikefany tamin'ity fifanintsanana ity :
Nanana ny heviny momba io fifanintsanana natao tahaka ny lalao ara-panatanjahantena goavana teo amin'ny firenena io ny The Blodwyn World:
Nilaza ny lanjan'ny fifaninanana izay nisy tao anatin'ny 17 taona lasa SportsKenya :
@SaddiqueShaban Natao ho an'ny orana ny elo. Fanajàna lehibe ho an'ny mpilalao, mpanohana ary ny tsirairay izay tafiditra ao amin'ny #safari7s ! Toetr'andro mendrika ho an'ny fifanintsanana !
@sunnysunwords Saf-7s fialamboly ho an'ny ankamaroan'ny olona dia fihaonana nokarakaraina, miendrika lanonana, misy efitra hisintahana.
@KenyaRugby247 Nilalao tahaka ny mpilalao matihanina Dennis Ombachi. Hery sy hafainganana, tsy nandresy izany #safaricom7s
@SafaricomLtd Niady mafy ny Morans an'i Kenià, tsara ny lalaony saingy tsy nanam-bintana ry zareo. Mankasitraka azy izahay ! #Safaricom7s
Ny fandihy Keniana Kayumbet dia natao ho fankasitrahana ny mpanohana ny baolina lavalava Keniana maneran-tany (ny lahatsary mirakitra ilay dihy, dia nampakarin'i safaricom7s ho any amin'ny Youtube tamin'ny 10 Mey 2010) :
Ary tahaka ny namaranan'i @JoyDoreenBiira ny bilaoginy :